‘पैसा बचाउन, संक्रमितलाई होम क्वारेन्टाइनमै’ – Health Post Nepal
‘पैसा बचाउन, संक्रमितलाई होम क्वारेन्टाइनमै’
२०७७ असार ७ गते १९:२६
गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका ६९ वर्षका पुरुषको असार ५ गते मृत्यु भयो। मृतक प्यारालाइसिसको उपचार गराउनको लागि भारत गएका थिए र जेठ २५ मा नेपाल फकिएका थिए।
उनी होम क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए। मृत्युपछि उनको नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो।
सरकारले भने ‘पैसा बचाउन’ र सबैलाई अस्पतालमा राख्न नपर्ने भन्दै हाेम क्वारेन्टाइन पठाउन थालेकाे छ।
होम क्वारेन्टाइनमा राख्दा ८० करोड बचत भएको मन्त्रालयको दावी, विज्ञ भन्छन्, सरकारले पैसाको लोभमा संक्रमण बढाउँदै छ’
नेपालभरि अस्पतालहरुमा ६ हजार ६ सय ७१ आइसोलेसन बेड छन्। संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले क्वारेन्टाइन सेन्टरहरुलाई पनि आइसोलेसन सेन्टार बनाएको छ।
र, ति सबैमा गरी आइतबारसम्म ७ हजार २ सय ३१ जना आइसोलेसनमा छन्।
९ हजार २६ जना संक्रमितमध्ये १ हजार ५ सय ७८ जना निको भएर फर्किसकेका छन्।
बाँकी केही होम क्वारेन्टाइनमै छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार लक्षण नदेखिएकाहरुलाई संक्रमितलाई यसरी होम क्वारेन्टाइनमा राख्दा राज्य कोषको ८० करोड रुपैयाँ जोगिएको छ।
हाम्रो टेस्टिङ प्रोटोकल र डिस्चार्ज प्रोटोकल चेन्ज गर्दा, करिब ८० करोड ४ हजार ४५ रुपैयाँ बिरामीको उपचार गर्दा खर्च जोगिएको छ’ सचिव अर्याल भन्छन् ‘खर्च घटाएर कसरी सर्भिस दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन निर्देशिकाहरू संशोधन गरेर लक्षणविहीन संक्रमितलाई पुनः परीक्षण नगरी होम क्वारेन्टाइनमा पठाउन थालेको छ।
यो समाचार तयार पार्दा सम्म देशभर ९४ हजार ९२८ क्वारेन्टाइनमा छन्।
अरु देशको अभ्यास हेर्दा, लक्षण नभएका संक्रमित घरमा बस्ने प्रावधान रहेको छ। तर, नेपालमा विदेशको अभ्यास लागु गर्न नसकिने बताउँछन्, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पुर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी।
पक्की घर नभएको, एट्याच बाथरुम नभएकाहरुलाई ‘होम क्वारेन्टाइन’मा राख्दा संक्रमण सर्नसक्ने जोखिम हुन्छ।
सरकारले अस्पतालमा नराखेर छुट्टै आइसोलेसन केन्द्र बनाएर राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘सरकार धेरै तालिम केन्द्र खाली नै छन्’, डा. मरासिनी भन्छन्, ‘तालिम केन्द्र प्रयोग गरियो भने ३ हजार शैय्यालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।’
तर, सरकार भने संक्रमितलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्दा पैसा जोगिएको बताउँदै आएको छ।
‘हाम्रो टेस्टिङ प्रोटोकल र डिस्चार्ज प्रोटोकल चेन्ज गर्दा, करिब ८० करोड ४ हजार ४५ रुपैयाँ बिरामीको उपचार गर्दा खर्च जोगिएको छ’ सचिव अर्याल भन्छन् ‘खर्च घटाएर कसरी सर्भिस दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।’
‘सोही गाइडलाइन अनुसार नै हामीले आइसोलेसनमा भर्ना भएका व्यक्तिमा कुनै लक्षण छैन भने जाँच नगरी नै डिस्चार्ज गर्ने नीति लिएका हौँ’, डा. लोहनीले भने, ‘यही गाइड लाइन अनुसार कतिपय आइसोलेसनमा भर्ना भएकाहरुको डिस्चार्ज समेत भएको छ।’
संक्रमित व्यक्तिमा कुनै लक्षण नभए वा १० दिनपछि पनि पोजेटिभ देखिएमा पनि उक्त व्यक्तिमा भाइरस मरेको वा अर्को व्यक्तिमा संक्रमण नसर्ने प्रमाणित भएको मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी बताउँछन्।
यो विभिन्न अनुसन्धानको सिफारिस र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओको) गाइड लाइनको सुझाव हो।
भदौसम्म ४० हजार संक्रमितको ‘किस्सा’
नेपालमा हालसम्म ९ हजार २६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यही अनुसार बढ्ने हो भने साउन मसान्त सम्ममा ४० हजार संक्रमित पुग्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ।
तर, संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिनसकेको भन्दै त्यत्तिको संख्यामा संक्रमित पुष्टि नहुने विज्ञहरुको दाबी छ।
केही छिटफुट बाहेक बाहिरबाट आएकाहरुमा मात्रै अहिले संक्रमण देखिएको डा. मरासिनी बताउँछन्।
‘मन्त्रालयले संक्रमण दोस्रो चरणमा रहेको दावी गर्दै आएको छ, डा. मरासिनीले भने, ‘चोथौ चरणमा संक्रमण फैलियो भने मात्र यो संख्यामा संक्रमित भेटिन सक्छन्।’
भारतबाट ‘आयातित’ केस छिटफुट रुपमा समुदायमा सरेको उनको भनाई छ।
मन्त्रालयको ताजा तथ्याङ्कअनुसार पिसिआर मार्फत १ लाख ७५ हजार १७३ परीक्षण गर्दा ९ हजार २६ मा संक्रमण देखिएको छ।
‘मन्त्रालयले बढी नजर अन्दाज गरिएको छ। संक्रमण फैलन नदिनको लागि तयारी गरेको राम्रो हो, डा.मरासिनी दावी साथ भन्छन्, ‘४० हजार संक्रमित केस पुग्दैन।’
साउन मसान्तसम्ममा २०–२२ हजार संक्रमित भेटिन सक्ने उनको अनुमान छ।
४० हजारभन्दा बढी संक्रमित पुग्नका लागि लाखौँ संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने र सरकारले परीक्षण गर्ने नसक्ने उनले बताए।